I-China i-350KG, i-900KG yeMagnethi yesonka yeeNqanawa zensimbi zePrecast okanye i-Plywood Shuttering manufacturers kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
I-350KG, i-900KG yeMagnethi yesonka yeeNqanawa zensimbi zePrecast okanye iPlywood Phuttering
Umazibuthe wesonka yenye yeemagnethi ezivaliweyo ezimile ngesonka. Isetyenziselwa ukulungelelanisa isikhunta sesitimela okanye i-plywood shuttering Iadaptha yendalo iphela eyongeziweyo inokuxhasa iimagnethi zesonka ukudibanisa ukungunda kwicala ngokuqinileyo. Kulula ukususa iimagnethi kwindawo efanelekileyo ngesixhobo esikhethekileyo sokukhululwa.
Uhlobo lwe-350Kg, 900Kg Umazibuthe weSonkaisetyenziselwa ukuhambelana nomngundo kaloliwe wensimbi okanye ukuvalwa kweplywood. Iadaptha yendalo iphela iyakwazi ukuxhasa iimagnethi zesonka ukudibanisa isikhunta esecaleni ngokuqinileyo. Kulula ukususa iimagnethi kwindawo efanelekileyo ngesixhobo esikhethekileyo sokukhululwa. Umazibuthe wesonka ufumaneka kubude be-125mm ye-350KG, kunye ne-250mm ubude be-900Kg. Indlu engaphandle ye-5mm engagqwaliyo yentsimbi engenakho ukufikelela kwintsebenzo engcono yokuhombisa abasebenzi, kunye nokumelana nokulungisa.
Chwetheza L (mm) W (phezulu) W (ezantsi) H (mm) I-NW (IKG) Umkhosi (KG)
Isonka-350 125 54 45 35 1.2 350
Isonka-900 250 54 45 35 2.3 900
Zonke iimagnethi zethu zesonka ezibonelelweyo ziphantsi kovavanyo lwe-100% ngaphambi kokuthunyelwa kwazo ukuze ziqiniseke ukuba zinokulingana nokuncanyathiselwa kwentsika yabathengi.
Egqithileyo I-1.3T, 2.5T, 5T, 10T i-Steel Recess yangaphambili yeMagnet yokuLungisa i-Anchor
Okulandelayo: Isinyithi Magnetic Triangle Chamfer L10x10, 15 × 15, 20 × 20, 25x25mm
Imagnethi yesonka engama-350KG
Imagnethi yesonka eyi-900KG
Imagnethi yesonka esandulelayo
U Imilo Magnethi Precast
0.9m Ubude Magnetic Side Rail kunye 2pcs Integr ...
1T Uhlobo Stainless Shell Shuttering Magnet ...
2100KG, 2500KG Ukutsala Force Precast eziphathekayo Ma ...
450KG Box iimagnethi kunye Push-tsala iqhosha
900KG, 1Ton Box iimagnethi For Precast Tilting Tab ...